तपाईंको अनलाइन प्रतिष्ठा अनुगमन गर्न परम मार्गनिर्देशन Martech Zone
तपाईंको अनलाइन प्रतिष्ठा अनुगमन गर्न परम मार्गनिर्देशन
आइतवार, फेब्रुअरी,, २०१ 8 आइतबार, जुलाई 26, 2015 Douglas Karr
ट्र्याकुरमा राम्रो व्यक्तिहरूले कसरी यो इन्फोग्राफिक सँगै राखेका छन् तपाइँको व्यक्तिगत वा तपाइँको ब्रान्डको प्रतिष्ठा अनलाइन निगरानी गर्नुहोस्। तिनीहरूले निर्दिष्ट चरणहरू:
तपाइँको प्रतिष्ठा पहिचान गर्नुहोस् - नाम ब्राण्ड नाम, कम्पनी नाम, उत्पाद नाम र विविधता अनुगमन।
तपाइँको श्रोताको संख्या - कसको तपाईको अनलाइन प्रतिष्ठा मा दांव छ?
आफ्ना लक्ष्यहरू बुझ्नुहोस् - तपाईं कसरी मापन गर्न लाग्नुहुन्छ तपाईंको प्रतिष्ठा सुधार भइरहेको छ कि छैन?
तपाईको आवश्यकता तोक्नुहोस् - तपाईंलाई कुन उपकरणहरू आवश्यक छ र कुन स्रोतहरू तपाईंलाई अनुगमन गर्न आवश्यक छ?
तपाईं कसरी मोनिटर गर्नुहुन्छ? - कुन प्रक्रियाहरू ठाउँमा सतर्क हुन र विवादहरूमा जवाफ दिनको लागि छ?
वार्तालापहरू कसले अनुगमन गर्नेछ? - तपाईं कसलाई अनलाइन प्रतिष्ठा मुद्दाहरूको प्रबन्धन र जवाफ दिने जिम्मा दिइरहनुभएको छ?
टैग: डोऱ्याउनइंफोग्राफ़कअनलाइन प्रतिष्ठाअनलाइन प्रतिष्ठा अनुगमनप्रतिष्ठा गाइडप्रतिष्ठा अनुगमनट्र्याकर
फेब्रुअरी १,, २०११ 8:१:2013 अपराह्न
तपाईं शर्त @Andybeal: disqus! ठूलो काम जारी राख्नुहोस्।
महान जानकारी डगको लागि धन्यबाद, मसँग अझ राम्रा ध्यानहरू छन् जब चीजहरू चित्र र राम्रा रंगहरू हुन्छन्! 😉
पोष्टका लागि धन्यबाद,
नमस्ते डगलस। तपाईंको दर्शनले कसरी अनलाइन व्यवसायको लागि प्रतिष्ठा महत्त्वपूर्ण छ भनेर देखाउँदछ। यो विशेष गरी लगानीकर्ता को लागी व्यापार को सबै कोण को महत्व को लागी एक सारांश दिन्छ